Download, Wụnye, Uninstall na Update Samsung Kies maka Mac
Gịnị bụ Samsung Kies Mac?
Samsung Kies Mac bụ Samsung ukara desktọọpụ software-agba ọsọ na Mac OS X 10.5 na elu. Ọ na-enye gị mfe ohere iji hazie music, video, foto na ndị ọzọ na Mac. Na ya, ị na-enwe ike nyefee music, video, foto na Podcast si Mac gị Samsung ekwentị, na ndị ọzọ ụzọ gburugburu. Ke adianade do, na ị na-ekwe ka mmekọrịta data gị Samsung ekwentị na nkwado ndabere na mpaghara ya data ka Mac. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji kwalite femụwe gị Samsung ekwentị, Samsung Kies maka Mac nwekwara ike ime na gị. Ụda ọma na chọrọ inye ya a ogbugba? Na akụkụ n'okpuru, m ga-eduzi gị site otú nwụnye, uninstall, imelite Samsung Kies maka Mac.
Part 1. Olee ibudata na ịwụnye Samsung Kies maka Mac
Part 2. Olee jikọọ Samsung Kies maka Mac
Part 3. Olee imelite Samsung Kies maka Mac
Part 4. Olee iwepụ Samsung Kies maka Mac
Part 5. Ọzọkwa ịgụ: onye ọzọ na Samsung Kies maka Mac
Part 1. Olee ibudata na ịwụnye Kies maka Mac
1. Lelee ngwaọrụ gị nlereanya na dowload Kies maka Mac
Agagharị Samsung ukara website na ala na peeji banyere Samsung Kies. The Mac version akwado ụfọdụ atụmatụ ntị, smartphones na mbadamba tọhapụrụ tupu Sept 2013. Ọ bụrụ na ekwe, download Samsung Kies maka Mac OS.
Samsung Kies maka Mac
OS X OSX 10.5 na mgbe e mesịrị
Ebe nchekwa (RAM) 512MB Free
Ike mbanye Space Ọ dịkarịa ala 100MB
2. Wụnye Samsung Kies maka Mac nzọụkwụ site nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. Control pịa KiesMac.pkg. Na mmapụta window, pịa Gaa n'ihu.
Nzọụkwụ 2. Pịa Gaa n'ihu ime na.
Nzọụkwụ 3. Click Kwere na-eso nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 4. Họrọ asụsụ, dị ka English na-aga n'ihu.
Nzọụkwụ 5. Ị nwere ike pịa ịgbanwe Wụnye ebe ... ịzọpụta wụnye ọnọdụ ka ọ bụla na gị Mac. Ma ọ bụ, pịa Wụnye.
Nzọụkwụ 6. The nhazi na-agba ọsọ. Tienụ mkpu ákwá n'ihi sekọnd.
Nzọụkwụ 7. Ugbu a, echichi na-okokụre. Malitegharịa ekwentị gị Mac-eji ya.
Part 2: Olee jikọọ Kies maka Mac na mbipụta
1. Nduzi na jikọọ ekwentị gị na Kies Mac
Abụọ njikọ ụzọ dị maka ị: USB cable njikọ na WiFi njikọ. Naanị ntị na nwere Kies site WiFi atụmatụ nwere ike jikọọ site WiFi, ma ọ nwere ike ime ndị ọzọ ihe. Site na iji WiFi njikọ, ị nwere ike nweta nkwalite femụwe na nyefee DRM ọdịnaya. Ya mere, họrọ otu njikọ ụzọ dị ka ọnọdụ gị.
2. Samsung Kies Mac bụghị ejikọta?
E nwere ụfọdụ Atụmatụ ị pụrụ mgbe Samsung Kies Mac adịghị jikọọ ekwentị gị.
* Kwụpụ eriri USB na jikọọ gị Samsung ekwentị.
* Nso Samsung Kies Mac na-agba ya nke ugboro abụọ.
* Reboot gị Samsung ekwentị na reinstall Samsung Kies Mac.
* Malitegharịa ekwentị gị Mac na Samsung ekwentị.
* Lelee na kwalite Samsung Kies ka ọhụrụ version.
Part 3. Olee imelite Samsung Kies Mac na ekwentị
Pịa Kies> Mmasị na-egosi mmasị dialog. Họrọ Update taabụ. Mgbe ahụ, Samsung Kies version ị rụnyere ga gosiri na i nwekwara ike ego ọhụrụ version.If ị chọrọ asian nke ọhụrụ version, ị nwere ike nne Mmetụta Gwa Mgbe mmelite dị. Mgbe ahụ, pịa OK.
2. Samsung Kies Mac update femụwe
Nzọụkwụ 1. Run Samsung Kies Mac na ikwunye na eriri USB jikọọ gị Samsung ekwentị Mac. Jide n'aka gị Samsung ekwentị a ghọtara.
Nzọụkwụ 2. Pịa Basic Ozi. Ego ọdịnaya banyere femụwe. Mgbe ọ na-egosi a ọhụrụ mbipute nke femụwe dị, pịa Update.
Nzọụkwụ 3. Gụọ ọdịnaya banyere ịkpachara anya. Mgbe ahụ, nne Mmetụta M na-agụ nke niile dị n'elu ọmụma na Kwe Ka ịzọpụta. Mgbe ahụ, pịa Malite nweta nkwalite.
Cheta na: Tupu Samsung Kies update ekwentị, ị ga mma ndabere data na ekwentị gị. Pịa ndabere / Weghachi. Họrọ faịlụ i chọrọ ndabere. Mgbe ahụ, nne Mmetụta ndabere.
Nke ahụ bụ niile nduzi banyere otú ibudata, awụnyere na imelite Samsung Kies. Ugbu a, ị nwere ike iji Samsung Kies nyefee faịlụ na site na gị Samsung ekwentị.
Iwepụ Kies on Mac
Nzọụkwụ 1. Kwupu gị Samsung ekwentị na Mac. Gaa Samsung ukara website ibudata Samsung Kies maka Mac na gị Mac.
Kwụpụ 2. Pịa Downloads on Mac na-ahụ KiesMac.pkg. Control pịa ya na a window-abịa si. Pịa Uninstall. Nzọụkwụ 3. Na mmapụta dialog, pịa Open na-amalite uninstallation usoro. Mgbe Ọ na-okokụre, pịa Complete. Nzọụkwụ 4. Malitegharịa ekwentị gị na Mac. Ọ bụrụ na gị Mac-agba ọsọ OS X 10,8, ị mkpa ịchịkwa-pịa Uninstall, wee pịa Open. Pịa Open ọzọ iji nye ohere.
Samsung kies bụghị Ijikọ ekwentị gị na Mac? Nwee ike gwụrụ nke Samsung Kies ma na-achọ ka onye ọzọ? Ebe a bụ ihe ziri ezi onye, ​​ya bụ, Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Ọ bụ ihe dị mfe na-eji Mac Android Manager,-enyere gị aka jikwaa kọntaktị, SMS, music, video, foto na ngwa ọdịnala na Mac enweghị ihe ọ bụla hassle.
Enweta ihe Samsung Kies Mac uzo ozo ebe a >>
Mma 1. 1-pịa na nkwado ma weghachite ekwentị data. Ọ na-ahapụ gị ndabere gị na ekwentị kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, kalenda, ngwa ọdịnala na Mac na weghachite na 1 Pịa.
Njirimara 2. Jikwaa kọntaktị. Na ya, ị nwere ike mbubata / mbupụ kọntaktị na / site na ekwentị gị mfe. E wezụga na, na ị na-enwe ike ike, dezie ma hichapụ kọntaktị site na Mac.
Njirimara 3. Hazie ngwa. Ọ na-ahapụ gị wụnye, uninstall ngwa ọdịnala na batches, na mbupụ gị chọrọ ngwa Mac maka ndabere.
Njirimara 4. Send SMS si Mac. Na-eche annoyed banyere ngwa ngwa dee na ekwentị gị. Kwụsị na. Ugbu a, ị nwere ike na-ederede na-ezite ya na ndị enyi gị si Mac.
Olee otú Wụnye, Uninstall, Update Samsung Kies?
Olee otú ndabere Samsung ka ígwé ojii?
Otú nyefee Music si Mac ka Samsung?
Olee otú ndabere Samsung Galaxy S4?
Otú nyefee Data si Samsung ka iPhone?
Olee otú Detuo faịlụ site iPhone ka Samsung?
Olee otú nkwado ma weghachite Samsung Galaxy S3?
Gịnị mere Samsung TV Ike Play Video Format?
Samsung Video Editor: Olee dezie Samsung Video on PC
> Resource> Samsung> Olee otú Download, Wụnye, Uninstall na Update Samsung Kies Mac